ओली नै फेरी यसरी भने प्रधानमन्त्री, शितल निवासमा आजै सपथ ! – Taja Khabar Np
संसदवाट विश्वासको मत नपाएपनि केपी शर्मा ओली नै फेरी प्रधानमन्त्री हुने संकेत देखिएको छ । दिउसो ४ वजे सम्म आफ्नो माग पुरा नभए राजिनामा दिने सर्त राखेका माधव नेपाल पक्ष पनि अलमलिएको छ । राजिनामाको पत्र खल्तीमा राखेर अध्यक्ष ओलीसंग वार्तामा बसेका माधव कुमार नेपाल वार्तावाट अझै निस्किएका छैनन् ।
See also गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसद ‘तटस्थ’, भएपछी फेरि गुरुङ नै मुख्यमन्त्री !
राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय सिमा साँझ ९ वजे सकिन्छ । तर देउवाले पनि वहुमत पुर्याउन नसक्दा उनको सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ ।
उता राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरुले भने राति ९ बजेसम्म काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई कुरेर बस्ने भएका छन् । राति ९ बजेसम्म देउवाको टोली नआएमा केपी ओलीलाई नै ठूलो दलको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने शीतलनिवासको तयारी छ ।
जसपाबाट ७ जना मन्त्री बन्दै
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने निश्चित भएको छ ।
२७ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी तथा जनता सामाजवादी पार्टी ९जसपाको उपेन्द्र यादव, डा। बाबुराम भट्टराई० पक्षले संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रयास गरे पनि बहुमत नपुगेका कारण ओली पुन प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।
संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट २७ गतेको बैठकमा १२४ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर गरिए पनि हाल १२० जना मात्र सांसदहरु रहेका छन् । जसपामा उपेन्द्र र बाबुरामले जबरजस्त ४ सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा मतदान गर्न लगाएका थिए । तर हाल उक्त चार जना सांसदहरु अध्यक्ष महन्थ थाकुर तथा राजेन्द्र महतोको समूहमा फर्किएकाले गठबन्धनको संख्या घटेको हो । योसँगै उपेन्द्र र बाबुरामको समूहमा १३ जना सांसदहरुमात्र रहेका छन् । योसँगै कांग्रेस, माओवादी तथा सत्ता लिप्त उपेन्द्रको सपना चकनाचुर भएको छ ।
आज बुढानिलकण्ठमा कांग्रेसका सभापति देउवासँग भएको छलफलमा समेत गठबन्धनलाई सहयोग गर्न नसक्ने जसपाका अध्यक्ष महन्थ र राजेन्द्रले स्पष्ट पारिसकेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष समेत अध्यक्ष महन्थले उपेन्द्र समूहले गरेको कुनै पनि निर्णय पार्टीको हुन नसक्ने भन्दै आधिकारी जानकारी समेत गराई सकेका छन् । यो सँगै गठबन्धनले सरकारको बागडोर संहाल्ने सपना तुहिएको छ ।
See also मास्क नलगाई हिँड्नेलाई यस्तो सजाय गरेपछी सब आत्तिए
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न गरेको आह्वान आज सकिँदैछ । कांग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि पुनः संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतामा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्रीको सपथको तयारीसँगै जसपा महन्थ तथा राजेन्द्र समूहका ७ जनाले मन्त्री बन्ने भएका छन् । बुधवार बालुवाटारमा भएको सहमतिअनुसार नयाँ सरकारमा ओलीले जसपाका ७ जनालाई मन्त्री बनाउने तय भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जसपालाई कुन कुन मन्त्रालय र को को हुने भन्ने निर्क्यौल हुन बाँकी छ ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन माधव कुमार नेपाल समूहसँग समेत चरणवद्ध रुपमा वार्ता गरिरहेका छन् । माधव नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरिएको कारवाही फुकुवा भइसकेको छ ।